Mahatsiaro adinoina ny mponina dimy taona taorian’ny fielezan’ny tsimokaretina VIH tany amin’ny kaominina Kambodziana iray · Global Voices teny Malagasy
"Tsy misy miraharaha izahay. Tsy misy mihevitra ny momba anay"
Voadika ny 23 Septambra 2019 5:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Română , Esperanto , Italiano, Español, 日本語, English
Vehivavy voan'ny aretina SIDA ao amin'ny kaominina Roka ao Battambang, volana Jona 2019. (VOD/Saut Sok Prathna)
Avy ao amin'ny VOD News, tranonkalam-baovao mahaleotena any Kambodza, ity lahatsoratra nahitsin'i Saut Sok Prathna ity ary naverina navoaka ato amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty .
Tsy misy mipetraka ao amin'ny kaominina Roka any Kambodza, any amin'ny distrikan'i Sangke any Battambang ny tranon'i Yem Chrin, mpitsabo iray eo an-toerana izay manefa 25 taona sazy an-tranomaizina ankehitriny.
Tamin'ny taona 2015, nahita azy fa meloka tamin'ny fanomezana fitsaboana tsy nisy fahazoan-dàlana ny fitsarana any amin'ny faritany . Ankoatra ireo fiampangana maro hafa dia hita tamin'ny farany fa tompon'andraikitra tamin'ny fihanaky ny tsimok'aretina VIH tamin'ireo mponina anjatony tao amin'ny tananakely tamin'ny taona 2014 i Yem Chrin noho ny tsy nanoloany ny fanjaitra fanindronana efa maloto.
Nahasarika ny sain'ny firenena sy iraisam-pirenena ity raharaha ity nandritra ny fotoana vitsivitsy satria tsikaritra tsikelikely fa saika efa ho ny mponina miisa 300 – izay manomboka amin'ny ankizy hatramin'ny olondehibe 80 taona ary ireo moanina tao amin'ny mônasitera teo an-toerana – no hita fa mitondra ny tsimokaretina SIDA rehefa nanaovana fitiliana .
Rehefa nahasarika ny saina izany dia tonga ny fanohanana: Torolàlana momba ny fomba hiainana miaraka amin'ny VIH SIDA, ny fanavaozana ny lalana sy toeram-pitsaboana ao an-toerana, ny fandaharana fanampiny hanampiana ny fanabeazana ny ankizy.
Saingy dimy taona taty aoriana, lasa iray tamin'ireo tena nangina ny fiainana tao amin'ny kaominina sy nahitana fahafatesana mialoha ny fotoana. Hoy i Ray *, vehivavy 66 taona miaina miaraka amin'ny VIH SIDA
Tsy misy miraharaha. Tsy misy mieritreritra momba anay. Tsy fantatro ny antony tsy hiraharahian'izy ireo.
Nilaza i Saloeun, 34 taona, fa mitondra ny tsimokaretina VIH izy sy ny fianakaviany miisa dimy. Vizana sy reraka izy nandritra ny andro maro ary hitany fa sahirana izy vao mahatsiaro zavatra.
Mila fanohanana bebe kokoa ny ankizy sy ny efa zokiolona ao amin'ny kaominina, hoy izy.
Maro ny ankizy namoy ny reniny. Tokony homena fanohanana izy ireo hanohizany ny fianarany.
Miaina miaraka amin'ny tsimokaretina VIH ny zanak'i Samoeun lahy 13 taona. Nilaza ilay renim-pianakaviana 34 taona fa mahatsiaro tena mitoka-monina izy satria miatrika fanavakavahana lalandava ny fianakaviana.
Manirery tokoa aho izao. Tsy te hahafantatra ahy ve izy ireo? Tsy tiako ho toa izao no niafarany.
Nilaza anefa ireo tomponandraikitra any an-toerana fa manao izay azony atao izy ireo ho an’ny kaominina. Nilaza i Su Sanith, tale lefitry ny sampandraharahan'ny fahasalamana ao amin'ny faritany Battambang fa manara-maso akaiky ny zava-manjo ao Roka ny governemanta eo an-toerana na dia tapaka aza ny fanampiana iraisam-pirenena sy nasionaly.
Nitombo ny fanampiana nasionaly sy iraisam-pirenena ho azy ireo rehefa niseho ny fielezan'ity otrikaretina ity. Toa nangina anefa izany taty aoriana.
Na izany aza, 95 isanjaton'ny mponina ao amin'ny tananakely izay tratran'ny tsimokaretina no nahazo fitsaboana antiretrovirals, ka olona miisa 10 ihany no nifindra monina na nijanona tsy nihinam-panafody, hoy i Sanith.
Mponina iraika amby telopolo tamin'ireo mponina miisa 285 mitondra ny tsimokaretina VIH no maty hatramin'ny fielezan'ny tsimokaretina, hoy izy ary mihoatra ny 60 taona anefa ny ankamaroan'izy ireo. Zaza iray sy tanora miisa telo ihany koa no anisan'ireo maty.
Farafahakeliny tranga roa vaovao tamin'ny VIH SIDA no hita tao amin'ny kaominina, hoy ihany i Sanith.
Nilaza ny governoran'ny faritra ao Battambang, Nguon Ratanak fa asiana lalana vaovao mankany amin'ilay kaominina ary hohavaozina ihany koa ny tobim-pahasalamany ho hopitaly misy dokotera matihanina mba ho porofon'ny fanohanan'ny governemanta.
Mahazo [fanohanana] avy amin'ny Vokovoko Mena sy ny sisa izy ireo. Tsy miahiahy firy intsony ny vahoaka ankehitriny satria fantatr'izy ireo ny tokony ataony hikarakarana ny fahasalamany.
Fa ho an'ny mponina ao amin'ny kaominina Roka, toa tsy azo ampitahaina amin'ny fahasarotan'ny fiainana isan'andro miaraka amin'ny aretina ny fihenan'ny fitsaboana. Toa miatrika ny fiainana irery izy ireo amin'izao fotoana izao, hoy izy ireo.
Nilaza i Samoeun, renim-pianakaviana 34 taona fa nivarotra katsaka vao mafana amin'ny môtô-ny izy ary nankany Thailandy mba hitadiavana vola fanampiny ho an'ny zanany lahy.
Herintaona mahery izy no tsy nahita tomponandraiki-panjakana nitsidika ny faritra, hoy izy. Lasa nivadika hasosorana ny fahatsapana tsy firaharahiana sy ny fahadisoam-panantenana.
“Tsy tiako ny hanadinoana ahy”, hoy izy.
*Tsy nolazaina feno ny anaran'ireo vehivavy.
Nadika sy nasiam-panitsiana avy amin'ny lahatsoratra ôrizinaly tao amin'ny VOD Khmer